Uhola elinye lamahhovisi amqoka ekusebenzeni ukuze intando yabantu ithele izithelo. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE ngalo msebenzi nangokukhula kwakhe - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Wazibona onile, wase enquma ukuthi kufanele agweme ukuvelela ukuze angazidonseli amehlo abantu; nokuyindlela aqhubekile waphila ngayo ngaphambi kokukuyiyeka.
Namhlanje loku kuzethemba kwakhe kuhlomulisa iNingizimu Afrika njengoba umCwaningimabhuku-Jikelele uNksz uTsakani Maluleke ehlale esemehlweni abantu ngenxa yomsebenzi wakhe. Leli hhovisi elimqoka aliholayo libheke ukuthi imali yabakhokhintela isetshenziswa ngendlela efanele.
Okunye okugqamisa uNksz uMaluleke wukuthi ungowesifazane wokuqala ukuphatha lesi sikhundla anezinyanga eziwu-15 eqalile kuso. “Kwangithatha isikhathi eside ukuyeka le nto yokuthi ukuze ngigweme ukuzidonsela amehlo abantu kumele ngingaveleli. Sengafunda ukuthi ukuzenyeza akusizi muntu ngalutho futhi ungavumeli abanye abantu bakunqumele ongakwenza.”
Ngalesi sigameko kwakungamqali uNksz uMaluleke ukuthi ehlelwe yinto esikoleni emfundisa “indawo yakhe”.
“Kukhona umfana esasifunda naye ngisafunda eSoshanguve esasihlale sishintshane naye ngokuphuma unombolo 1 nonombolo 2. Ngisakhumbula negama lakhe kwakuwuKenneth. Kwathi ngelinye ilanga ngiphume unombolo 2 ngaya ekhaya ngafika ngaxoxa. Hheyi angikaze ngithethiswe kanje, ngatshelwa ukuthi ngingavumeli muntu angitshele ukuthi akufanele ngibe ngcono naye, ikakhulukazi ngoba ngiyintombazane.
“Ngikhumbula ukuthi uthisha wethu washo into eyayinokuthi kuhamba kahle-ke uma kunje, yiyona ndlela izinto okufanele zibe yiyona, nokuyiwona mqondo engaya ekhaya nawo.”
Ihhovisi lomcwaningimabhuku-jikelele linezisebenzi eziwu-3 600 ezweni lonke. Bacwaninga amabhuku eminyango kahulumeni, omasipala namabhizinisi kahulumeni, yize kulawa amakhulu bengayicwaningi i-Eskom kanti banonyaka beqale iTransnet.
Umbiko wokugcina abawethule ngoDisemba, nobubheka ukusetshenziswa kwemali eminyangweni nasemabhizinisini kahulumeni ngo2020/21, uveze ukuthi isibalo sezikhungo ezithole imibiko emihle engenagcobho ziwu-115 noma u-27%, nokuyiminyango namabhizinisi abesebenzise uR1.9 trillion.
Ehlangane nabezindaba eThekwini ngesonto elidlule, uNksz uMaluleke ugcizelele akusho ngenkathi ethula umbiko ukuthi nakuba ukuthola umbiko omuhle kungasho ukuthi nezidingo zihlinzekwe kahle kodwa kuyisiqalo nesisekelo sokufinyelela lapho.
UNksz uMaluleke uzalwa futhi ukhulele eSoshanguve, ePitoli, ngaphambi kokuthi bathuthele eGoli. “Mina ngiwumntwana walokishini. Bathanda ukuthini ‘uyaphi emakhaya?’ Basithathela (umhlaba), ugogo nomkhulu babenomhlaba kodwa bathuthelwa eSoshanguve nomphakathi wonke ngenkani besuswa eWallmansthal eyaphendulwa indawo yamasosha. Uhulumeni wobandlululo wayithatha indawo, abanye abantu bathuthelwa eThemba, nokungakho-ke singenawo amakhaya esigoduka siye kuwona.”
Ngaphambi kokuqokelwa kulesi sikhundla, uNksz uMaluleke ubeyiphini lomcwaningimabhuku-jikelele esebenzisana nomcwaningimabhuku-jikelele ongasekho emhlabeni uMnu uKimi Makwetu. Nalapho wayeqophe umlando ngokuba owesifazane wokuqala ukuqokelwa kulesi sikhundla. Uthi lena ngenye yezinto ezimsizile ngesikhathi ethatha izintambo. “Kungisizile ukuthi besengivele ngilazi ihhovisi futhi ngikwazi okufanele kwenziwe, ikakhulukazi ngesikhathi sobhubhane. Okwesibili, wukuthi nginethimba elihle futhi eliwaziyo umsebenzi walo. Bayazimisela abantu engisebenza nabo futhi nginenhlanhla ukusebenza nabo nokwazi ukuthi umsebenzi wethu unomthelela ongakanani emphakathini nakuhulumeni… yiyona nto engikhuthazayo zonke izinsuku.”
Ezinye zezinto esezenzekile nezingavamile endleleni okucwaningwa ngayo amabhuku wukucwaninga umsebenzi ngesikhathi imali esanda kusetshenziswa ngaso, phecelezi i-real time auditing. Umthetho wakhona abacwaningimabhuku bafika emva kwendaba. Loku kwenziwe ngemali eyayihlinzekelwe ukubhekana nokubheduka kweCOVID-19.
Nakuba uNksz uMaluleke ethi lo msebenzi wenza umehluko omkhulu njengoba umNyango wezeziSebenzi ukwaze ukubuyisa uR2.7 billion owawusebenze kungafanele kodwa uthi ihhovisi lakhe alikwazi ukuzibophezela ekusebenzeni kanjena.
“Kungenzeka kona sikwandise ukucwaninga ngale ndlela kodwa akufanele loko kwenzeke ngendlela yokuthi kugcine sekungathi awubalulekile umsebenzi wabajutshelwe ukuphatha (imali) nabacwaningambhuku bangaphakathi. Thina asikwazi ukuba yonke indawo ngaso sonke isikhathi futhi akufanele ngoba kunabantu abaqokelwe ukwenza lokho,” kusho yena.
Enye yezinselelo eke yaba khona embonini yabo wukushoda kwabantu abamnyama, ikakhulukazi abesifazane, nathi kuyajabulisa ukubona indlela isibalo esesikhuphuke ngayo uma eqhathanisa nangesikhathi bona besanda kuqala.
IHhovisi lomcwaningimabhuku-jikelele linesandla esikhulu kuloku njengoba benohlelo lwamathwasa okumanje awu-1 200. Omunye wabantu abakhiqizwe yilolu hlelo lokuqeqesha amathwasa wuMnu uPolani Sokombela osanda kuqokwa waba yi-chief financial officer yaleli hhovisi.
Nokho uthe uyavumelana ne-Association for the Advancement of Black Accountants of Southern Africa ukuthi kumele kucutshungulwe into yomehluko endleleni okuphasa ngayo abantu abamnyama engafani nendlela okuphasa ngayo abelungu njengoba ethe kusenenkinga uma sekufikwa kwi-board exam.
UNksz uMaluleke uthi isifiso sakhe wukuthi mhla ededa kulesi sikhundla kube wukuthi sekunomehluko endleleni okuphathwa imali kahulumeni ngayo, kuqokwe abantu abawaziyo umsebenzi. “Singagcini nje ngokugxeka okubi bese kuthi okuhle senze ngathi yinto engathi shu. Kumele sakhele phezu kokuhle ukuze indlela izinto ezenziwa ngayo izoba ngefanele.”
Uyi-chartered accountant eqeqeshwe e-UCT;
Uphumula ngokuhlala nabantwana bakhe abaneminyaka ewu-18 nemihlanu;
Abanye babantu abukela kubona nguSerena Williams noLewis Hammilton.